Xog cusub oo ku saabsan sababta ka dambeysay burburka diyaaradii ku dhacday Beledweyne
Beledweyne (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahino dheeraad ah ka soo baxaya sababtii ka dambeysay diyaaradii shalay ku burburtay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Warbaahinta Kenya ayaa sheegaysa in Kabtankii diyaarada uu sheegay sababta ka dambeysay bur burka diyaarada inay aheyd dameer soo galay dhabaha diyaarada ay ku dagto.
Waxa uu sheegay Kabtan Xuseen Maxamed in diyaaradaasi oo ay leedahay Shirkadda Bluebird Aviation ee dalka Kenya ay siday shixnad gargaar ah iyo sahay ay u waday Ciidamada Jabuuti ee ka tirsan Amisom kuna sugan Beledweyne, isla markaana ay dhacdadaasi qabsatay.
Inkastoo aysan ka dhalan khasaaro nafeed diyaarada burburtay ayaa waxaa ka dhashay mid hantiyadeed maadaama diyaarada ay gubatay, waxaana kabtanka uu cadeeyay in sabab uu u ahaa dameerka oo galay dhabaha ay diyaarada ku dageysay.
“Diyaaradeena waxaa ay cunto iyo agab kale u waday Ciidamada Jabuuti ee Amisom, waxaana diyaarada ay aroortii hore ka timid dalka Jabuuti laakin nasiib wanaag dhamaan Shaqaalaha Diyaaradda waa ay nabad qabaan ayuu yiri ” Kabtan Xuseen.
Tags: Beledweyne, Burburka diyaarad, Hiiraan, ku dhacday, Sabab